Mbido Sheikh Bin Rashid Al Maktoum | DCC
Ihe mkpali sitere na Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum anyi agaghi echefu
Onye nwe ya Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum bụ Onye na-achị achị Dubai na osote onye isi oche nke UAE onye sitere n'ike mmụọ nsọ ọ bụghị naanị ụmụ amaala na ndị bi na mba ahụ kamakwa ọtụtụ ndị mmadụ gburugburu ụwa.
Akwa Onye Ndú, nke nwere ihe karịrị akwụkwọ ise ka ọ na-akwụ ụgwọ ya, na ihe nketa ya na-agbanwe Dubai dị ka obodo ụwa, ọ na-amasị ya ọtụtụ ndị mụtara ọtụtụ ihe n'aka ya.
Dubai World Cup 2018 nde Na onye ji Mohammed bin Rashid al Maktoum egwu mgbe agbụrụ agbụrụ!
Anyị na-agwọta pearl ndị kachasị amasị anyị site na nzaghachi ya na ọtụtụ afọ.
"Ihe ka ọtụtụ ná mba anyị bụ ndị ntorobịa anyị. Ọdịnihu anyị dị n'aka ha. Anyị bụ mba na-eto eto, na-enwe obi ụtọ na ọ bụ nwata. "
"Anyị ji obi ike na-akwado ndị ntorobịa anyị, ọ ga-emekwa ka ha nwee ike inweta ọkwa kachasị elu nke mmepụta ihe na mmepụta ihe na mpaghara niile."
"Ọdịnihu dị n'aka ndị na-eto eto UAE, ha bụkwa ọkaibe nke mba ahụ maka ọdịnihu dị mma."
"Nwa ntorobịa kwesiri ikere òkè dị mkpa na emume a (Expo2020) ma nweta ohere iji lelee, mụta ma tụnye echiche ihe okike ka ha wee zụlite usoro azịza maka ịmepụta ọdịnihu kacha mma maka mpaghara anyị na ụwa niile.. "
"Aka na mmezu nke ntorobịa wuru obodo anyị. Ntorobịa bụ ike anyị na ngwa ngwa bụ akụ anyị maka ọdịnihu. "
"Ịmeghari akụkọ akụkọ ụmụ nwanyị ga-eme ka ncheta nke ndị anyị na akụkọ ihe mere eme nke mba anyị dịghachi" -
"N'azụ obodo ukwu ọ bụla, ndị inyom dị ukwuu, na-edu ọgbọ ọ bụla ma na-azụlite ezinụlọ anyị na mba dị elu."
"Ọrụ anyị bụ ịmepụta gburugburu ebe obibi nke na-egbochi ike ụmụ nwanyị - nke na-echebe ùgwù ha na ịbụ nwanyị ha, na-enyere ha aka ịmepụta nghazi kwesịrị ekwesị ná ndụ ha, ma jiri nkà na ikike ha kpọrọ ihe. Nyere ebe a, enwere m obi ike na ụmụ nwanyị agaghị arụ ọrụ ebube. "
"Ekwuru m ya n'olu dara ụda ma doo anya: Kpachara anya, ụmụ nwoke, ka ụmụ nwanyị wee ghara ịnapụ gị isi ọrụ nduzi na mba ahụ."
"70 pasent nke ndị ọrụ m gụnyere ụmụ nwanyị."
"Anaghị m enye ụmụ m echiche m, ma nye ha nnwere onwe ime nhọrọ; nke a bụ otú nna m si zụlite m. "
"Nne m, ka nkpuru obi ya zuru ike n'udo, gosipụta àgwà m; ekele ya, enwetawo m ọtụtụ ụkpụrụ, ezi àgwà na nkà. "
"Oge kacha mma maka nwoke bụ oge ya na ezinụlọ ya na-eri."
"Nke ahụ bụ nne, ọ dịtụghị eri ruo mgbe ọ hụrụ anyị na mbụ, ọ dịghịkwa mgbe anyị zuru ike ruo mgbe anyị rahụrụ ụra, ọ dịghịkwa enwe obi ụtọ ọ gwụla ma anyị nwere mwute."
"Ihe kachasị emetụta nna m ... site na ya, m mụtara inwe ndidi na ịma ama tupu ị gafee ikpe"
"Ndụ dị mfe adịghị eme mmadụ, ọ bụghịkwa na-ewuli mba dị iche iche. Ihe ịma aka na-eme mmadụ, ọ bụkwa ndị ikom a na-ewu mba. "
"Anyị aghaghị ịgbalịsi ike iji nweta ọgụgụ isi na omenala nke na-egosi na ọganihu na nkwụsi ike ga-ekwe omume naanị site n'ịnọgide."
"Ọtụtụ ndị na-ekwu okwu; anyị na-eme ihe. Ha na-eme atụmatụ; anyị na-enweta. Ha na-ala azụ; anyị na-aga n'ihu. Anyị bụ ihe akaebe na-egosi na ọ bụrụ na mmadụ nwere obi ike na nkwa iji gbanwee nrọ ka ọ bụrụ eziokwu, ọ dịghị ihe nwere ike ịkwụsị ha. "
"Nzube, atụmatụ na ọhụụ maka ọdịnihu bụ ezigbo ihe onwunwe anyị n'ọchịchọ maka ịka mma na ihe ịga nke ọma."
Na ndu na mmadu
"Ọchịchị ọma adịghị ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ na-erughị imepụta obi ụtọ. N'ezie, ọ dị mfe "
"Ọ bụ ụdị ndụ mara mma, ma ọtụtụ ndị na-etinye ya nchegbu, na-echegbu onwe ya ma na-agbarụ. Ị nwere ike ịhụ ịma mma nke ndụ na ịchị ọchị nke nwa, obi ọmịiko nke nne, ọchị nke enyi ma ọ bụ ịhụnanya nke a ọmịiko nwunye. "
"Onye ọ bụla nke kwenyesiri onwe ya ike na ya erughị eru n'ọnọdụ mbụ ga-alarịrị anya na ya agaghị adị site na mmalite."
"Egwuregwu nke kacha mma enweghị usoro ọ bụla."
"Ndụ bụ onyinye na-enweghị atụ ụfọdụ ndị na-egosi na ị gaghị enwe ekele. Na ume ọ bụla ma na-esi ísì ụtọ, ihe ọ bụla aka na anya ọhụụ anyị nwere site na ahụmịhe ọhụrụ na ohere ịnweta ọgaranya nke ahụmịhe. Ụda ọ bụla anyị na-anụ, site na abụ nke nnụnụ na obi ọjọọ nke olu iwe, bụ ọrụ ebube. "
"Mmadu niile nwere ihe omimi nke onwe ha n'ime onwe ha na ichere ka ha gbapu."
“Onye ọ bụla na-amalite obere. Anyị niile na-amalite ndụ dị ka otu sel. Kwa azụmahịa na-amalite dị ka otu onye nwere echiche. Kedu otu ị na-aga ngwa ngwa, etu ị ga-esi dị, dị n'aka gị. Ọhụụ gị ga-ebuwanye ibu, ihe ị rụpụtara ga-ebuwanye ibu. You ga-asụ ngọngọ n'ụzọ? Ikekwe, mana anyị enweghị ike ikwe ka ụjọ mee ka anyị dị obere. Anyị kwesịrị inwe obi ike ịbụ nnukwu. "
"Njedebe adịghị ada n'ala; ọ na-anọgide n'ebe ahụ mgbe ị daa, nke kachasị njọ bụ mgbe ị kpebiri ịghara iguzo ọzọ. "
"Iwere ihe ize ndụ ma daa adabaghị. Ezigbo ọdịda bụ ịtụ egwu ịghara itinye ihe ize ndụ ọ bụla "
"Mkparịta ụka na-eme ka ị dịkwuo ike. Mkparịta ụka na-atụ egwu naanị site na ndị na-adịghị ike. "
"Mgbe ị na-eme ihe ịchọrọ, ị gaghị eche na ị na-arụ ọrụ.
"Gbanwee ma ọ bụ na ị ga-agbanwe: ndị okenye na-eleghara ezi ndị ha anya ga-ahapụ. Nduzi bu oru, obughi uzo inweta ihe omuma.
"Ezi nduzi na-etinye mmasị nke obodo n'ozuzu ya n'ihu ndị nke otu ọ bụla. Enweghi ike iduzi ndi isi n'adighi ike.
"Ezi onye ndú bụ onye na-emepụta ebe dị mma iji mee ka ike na ike nke ndị otu ya. Onye ndu ukwu na-emepụta ndị ndú dị ukwuu, ma ghara ibelata ụlọ ọrụ na otu onye. "
"Okwu ahụ agaghị ekwe omume ọbụghị na akwụkwọ ọkọwa okwu onye ndú. N'agbanyegh i nnukwu ihe isi ike, okwukwe siri ike, mkpebi siri ike na mkpebi ga-emeri ha. "
"Ezi onye ndu anaghị enweta ike site n'ọkwá ya, kama site na omume ya, site n'ịhụ ndị mmadụ n'anya, nakwa site na ihe ọmụma ya, agụmakwụkwọ na ịkwalite ọrụ ya."
Na Dubai na UAE
"Obi nke UAE kpara aka na nti nke ndi isi, ochichi na ndi mmadu; ha nile dị n'otu ma bụrụ ndị a na-apụghị imeri emeri dika otu mba. "
"UAE kwadoro ọnọdụ ya dị ka ogige zuru ụwa ọnụ maka ihe ọmụma na ọdịbendị, na-adọta ụfọdụ n'ime nkà ndị kasị egbukepụ ụwa."
"Achọrọ m ka Dubai bụrụ nọmba. Ọ bụghị n'ógbè, mana n'ụwa. Ọnụ ọgụgụ niile n'ime ihe niile: agụmakwụkwọ dị elu, ahụike, na ụlọ. Achọrọ m inye ndị m ụzọ kachasị mma. "
“Dubai agaghị edozicha ihe ọ bụla na-erughị ihe mbụ ebe. "
"Agaghị m ahapụ otu ohere ma chere maka onye ọzọ. Anyị erubeghị ihe mgbaru ọsọ anyị na-agbasi mbọ ike. Ihe ị na-ahụ ugbu a abụghị ihe ọ bụla e jiri ya tụnyere ọhụụ anyị ... naanị akụkụ dị nta nke ihe dị n'ihu. "
"Anyị na-achọ imepụta olileanya ọhụrụ maka mpaghara anyị, meziwanye ndụ ndị mmadụ na ịkekọrịta ozi UAE nke inye ụwa"
"N'ụbọchị ọhụrụ ọ bụla n'Africa, otu nwanyị mgbapụta na-eteta na ọ maara na ọ ghaghị ịpụ ọdụm ma ọ bụ laa n'iyi. N'otu oge ahụ, ọdụm na-ada ma na-agbada, ebe ọ maara na ọ ghaghị ịpụ na mgbapụta kachasị njọ ma ọ bụ agụụ. Ọ dịghị iche maka agbụrụ mmadụ. Ma ị na-ewere onwe gị nne mgbada ma ọ bụ ọdụm, ị ghaghị ịgba ọsọ karịa ndị ọzọ iji lanarị. "
"Ọganihu ụmụ mmadụ na-adabere n'ike nke echiche ya na ikike ya ịgbasa ha site n'otu onye gaa na onye ọzọ gafee ọzara, ebe dị iche iche na oké osimiri."
"Ụwa na-echere onye ọ bụla - ndị na-amụtaghị ma gbanwee nwere ike ịsụ ngọngọ ma daa"
"Anyị na-achọ ịmepụta olileanya ọhụrụ na mpaghara anyị, meziwanye ndụ ndị mmadụ na ịkụnye ọdịbendị ọhụrụ nke ọrụ enyemaka mmadụ na obodo anyị."
Kedu ihe ọkacha mmasị gị Mohammed Mohammed kwuru? Enwere ike ịgbakwunye nke gị! Zipu arịrịọ maka office@dubaicitycompany.com
(Marketing Communications, Onye edemede, Onye Okike Oke)
Ụlọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezi nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike ịnweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ n'ime United Arab Emirates ya na asusu gi.